“Faysal Wuxuu dhex Fadhiistay Siyaasaddii Loogamana Fadhiyin Inuuk u biiro” | Salaan Media
“Faysal Wuxuu dhex Fadhiistay Siyaasaddii Loogamana Fadhiyin Inuuk u biiro”
Hargaysa (SM):- Cismaan C/laahi Cigaal (Cismaan Hindi) oo ka mid ah siyaasiyiinta Somaliland ayaa sharci daro ku tilmaamay golaha wada tashiga iyo badbaadada qaranka oo dhawaan lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa, waxaanu ku tilmaamay in golahaasi mid baalmarsan sharciga dalka u yaala.
Cismaan C/laahi Cigaal oo maanta u waramay qaar ka mid ah warbaahinta, ayaa si gaar ah u weeraray guddoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe oo ka mid ahaa xubnaha golahaasi ku dhawaaqay waxaanu sheegay in aan Faysal Cali Waraabe looga fadhiyin in uu dhex fadhiisto gole aan sharci ahayn mar haddii uu yahay guddoomiye xisbi mucaarida oo sharci ah.
Cismaan C/laahi Cigaal oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi “golaha lagu sheegay wada tashiga waxaanu arkayaa oon doonayaa in aan hoosta ka xariiqo meel uu kaga yaalo shuruucda iyo dastuurka Somaliland, guddi cankaas in la sameeyo oo badbaadinta qaranka maanta haday iyagu sameeyeen qar kalaa samayn doona bari ka maalin anaga iyo qalooyin kalaa samayn doona, goleyaashu way fara badnaan doonaan khalkhal iyo iska horkeen baa iman doona”.
Cismaan C/laahi Cigaal oo naqdinaya guddoomiyaha xisbiga UCID waxa uu yidhi “Faysal ma aha ninkii ku biiri lahaa oo dhan lahaa waxaan ka mid ahay golaha badbaadinta qaranka iyo wada tashiga Somaliland. Faysal sidaan hore idiinku soo sheegay waxa uu madax ka yahay xisbi qaran oo la yidhaa UCID oo umadu u codaysay oo ugu codaysay inuu ilaaliyo danaha Somaliland. Faysal waxaan leeyaay wuu ku dhex milmay Faysal roolkiisii wuu garan la’yahay. Faysal waa ninka kaliya ee haysta meel laga duulo garoonkii kubadu diyaar buu u yahay”.
Cismaan C/laahi Cigaal (Cismaan Hindi) ayaa ku amaanay madaxweynaha Somaliland saamiga uu xukuumadda ka siiyay beelaha darafyada waxana uu tilmaamay in madaxweynuhu siiyay wasaaraddaha ugu sareeya dalka, sida wasaaradda gaashaandhiga, caafimaadka iyo qoyska iyo arrimaha bulshada iyo kuwo kale. Cismaan C/laahi Cigaal (Cismaan Hindi) ayaa ugu dambayntii waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu xayiraada ka qaado wargeyska Hubaal.